Safiir saaxiib la ahaa Farmaajo oo Afka furtay, uguna baaqay Farmaajo inuu xilka iska dhiibo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya Maxamud Axmed Nur (Tarsan) ayaa si aan looga baran mas’uul xil dowladeed oo diblomaasi ah haya baaq toos ah u diray Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Tarsan oo aan dhowr bilood shaqo tegin markii ay dowladda Soomaaliya xiriirka u jartay dalka Kenya ayaa muuqaal uu soo duubay hawada u mariyey Maxamed Farmaajo oo uu saaxiib dhow la ahaa, wuxuuna ugu baaqay inuu go’aan ragnimo ah qaato Berri fadhiga Golaha Shacabka marka uu hortago, xilkana iska dhigo.
Wuxuu kula taliyey in mar haddii ay xaaladu gaartay dagaal iyo in ciidamadii qabiil loo qeybiyo inuu xilka iska wareejiyo. “Waqti baad heysataa karaamo iyo sharaf wadanka uga tag ama tartan gal, doorashadana ha diyaariyo Ra’iisal wasaaraha..” ayuu yiri Tarsan oo saaxiibkiisii Farmaajo kula taliyey inuusan dagaal xilligiisa kusoo dhammeyn, sharaf dhacna isu soo jiiidin.
Wuxuu ku eedeeyay madaxdii hore ee tartanka kula jirta Maxamed Farmaajo inay dalal shisheeye ku xiran yihiin oo lacag ka helaan, kuna dhaqaaqeen kala furka ciidamada iyo iska hor imaad.
Tarsan ayaan soo hadal qaadin muddo kororsiga ay sameeyeen Golaha shacabka iyo Farmaajo iyo dhibaatada ka dhalatay, waxayna taladiisa u muuqatay inuu hal dhinac u janjeero, iyadoo la is weydiinayo sababta uu Baraha bulshada u mariyey taladiisa ku socota Maxamed Farmaajo.
Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo hore usoo noqday Guddoomiyihii Gobolka Banaadir xilkaasoo uu u magacaabay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa ka mida ahaa siyaasiyiintii sida weyn uga horjeeday madaxweynihii hore Xasan Sheekha, wuxuuna dowladda Farmaajo noqday saaxiib u dhow iyadoo loo magacaabay safiirka Soomaaliya ee Kenya.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo Farmaajo ka dalbaday inuu banneeyo Villa Somalia, digniin u diray Golaha Shacabka
Next articleWargeys kashifay inuu Farmaajo heysto dhalasho dal kale iyo sababtii uu isaga celiyey Basaborka Mareykanka